19 Agasti - 1 Septhemba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
KUXWAYISWA ABAPHULA IMITHETHO IZINHLELO ZOKONGA AMANZI
NONDUDUZO NGCONGO KUZOQEQESHWA abesizane abangu-120 izinyanga ezintathu ngaphansi komkhakha wezokuxhumana nobuchwepheshe. Lapha kuzoba khona ukuqeqeshelwa ulwazi lokusebenzisa amakhompiyutha okuzosiza abantu besifazane kwezamabhizinisi. UMasipala ukholwa ukuthi ukuthuthukiswa kwabantu besifazane kungumgogodla wokusheshisa intuthuko eThekwini. UNonku Mthembu, woMnyango kaMasipala wezamaBhizinisi, ezokuVakasha nezeziMakethe uthe: ?Njengoba sigubha iNyanga yabeSifazane njalo ngo- Agasti, kunezinhlelo eziningi zokuthuthukiswa kwezomnotho okuqinisekisiwe ukuthi zizohlomulisa kakhulu abantu besifazane.? UMthembu uthe uchungechunge lwezinhlelo zomkhandlu ziza nokuthuthukiswa kwamakhono okubalwa kuzo nokuqeqesha abantu besifazane, ukubafundisa kabanzi ngokuthola izimali kanye namathuba akhona kwezamabhizinisi. Ngaphezu kwalokho, uMthembu uphinde wathi, uMasipala, ngokubambisana nabanye abalingani bawo uzokwethula uhlelo lokuqeqeshwa kwabesifazane olwaziwa nge Women in Business Mentorship Programme kule nyanga. Loluhlelo luzogxila kakhulu ekuqeqesheni abesifazane abangu-15 abazosebenzisana nezinkakha kwezamabhizinisi oluzothatha isikhathi esiyizinyanga eziyisithupha. UMasipala weTheku kunyaka wezimali ka- 2016/17 ubeke eceleni imali enguR1 million okuhlelwe ukuba ibhekelele izinhlelo zokuthuthukisa abantu besifazane. Mhlaka 27 Agasti, uMasipala uzosingatha iBusiness Networking Session lapho abesifazane bezokhuthazwa ukuba basukume bazibambele bakwazi ukwabelana ngamathuba okusizana beyimbokodo. Ngeminye imininingwane mayelana nalezi zinhlelo nokubekisa indawo, xhumana noNonhlanhla Khumalo ku: 031 311 4500 noma nge-email: nonhlanhla. khumalo@durban.go.za
ITheku lithuthukisa abesifazane kwezomnotho
Okhethelwe ukuba yiMeya yeTheku uZandile Gumede uvakashele umndeni wakwaKunene eMlazi owalahlekelwa ngamalungu omndeni amathathu engozini yemoto eMthunzini mhlaka 13 Agasti. Lo mndeni wawubuyela eThekwini emuva kweNgqungquthela yeSonto eyayiKwaNongoma ngenkathi imoto yawo ishayisana nenye. UGumede ubevakashele lomndeni ukuyowududuza. Isithombe: SIMPHIWE DLAMINI UMhlangano wokubekwa koMkhandlu omusha ka- 2016-2021 uzokuba mhlaka 24 Agasti eCity Hall lapho kuzofungiswa khona amakhansela angu-220. Kuzokhethwa uSomlomo,iMeya nePhini layo kanye no- Sotswebhu.
GUGU SISILANA UMASIPALA weTheku umemezele ukuthi ukugcotshwa kobuholi boMkhandlu obusha ozoqala kulonyaka ka-2016 kuya ku-2021 kuzokwenzeka mhlaka 24 Agasti eCity Hall. Ukuhlala kwalo mhlangano kuza emuva kokhetho lohulumeni basekhaya lwangomhlaka 3 Agasti obelwenzeka ezweni lonke. Ukhetho lomasipala lwenzeka njalo emuva kweminyaka engu-5 lapho kusuke kukhethwa khona amakhansela azosebenzela umphakathi iminyaka emihlanu. Iningi lemikhandlu yomasipala liphethwe yiKomidi eliPhezulu, iMeya kanye noMphathi Dolobha. ISikhulu sezoKhetho eSifundazweni, uMawethu Mosery sithe ngokomthetho wohulumeni basekhaya, i-Local Government Structures Act omasipala banikezwa izinsuku ezingu-14 emuva kokhetho ukuba babe nomhlangano wokuqala lapho kusuke kuzokhethwa khona amalungu azosebenzela iKomidi eliPhezulu loMkhandlu. ?Imiphumela yokhetho yakhishwa ngomhlaka 10 Agasti, ngakho ke izinsuku ezingu-14 ziqala kusukela mhlaka 11 Agasti,? kusho uMosery. Lo mcimbi wokubekwa kwamakhansela uzoqala ngemashi ezokuba seCity Hall ngo-09h00. UMphathi Dolobha, uSibusiso Sithole uyena ozobe ephethe lo mcimbi. Enye yezinto okuzokhulunywa ngazo kulo mhlangano woMkhandlu kuzokuba ukufungiswa kwamakhansela angu-220, ukukhethwa kukaSomlomo woMkhandlu, iMeya, iPhini leMeya kanye noSotswebhu. Kuzophinde kumenyezelwe namalungu eKomidi eliPhezulu, ukuqinisekiswa kwamalungu amakomidi ahlukene nosihlalo abakhethiwe. ?Ngifisa ukuqinisekisa bonke abahlali baseThekwini nosomabhizinisi ukuthi iDolobha liyaqhubeka nomsebenzi walo wokuletha izidingongqangi kubantu,? kusho uSithole. Kulo mhlangano woMkhandlu, kuzophinde kukhethwe uSomlomo okunguye ozobe eseqhubeka nohlelo kanye nokubekwa kweMeya. ?Sinesiqiniseko sokuthi konke esikwenzayo kuzoqinisekisa ukuthi uhulumeni wasekhaya wentando yeningi wesihlanu uqala ngokwenza umsebenzi wawo wokuletha izidingongqangi nokusebenzela umphakathi,? kusho uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uDes van Rooyen. gugu.mbonambi@durban.gov.za